Galteewwan yemuu islaayidii mul'istu hajjatu fayyadamu dandeessa.
Galtee ce'umsaa islaayidii irratti fayyadamuuf
Mul'annoo Baratamoo keessatti, islaayidii galtee ce'umsaa itti dabalu barbaaddu fili.
Heerata Hojiirratti, Islaayidii Cehumsa cuqaasi.
Tarree keessaa chemsa islaayidii fili.
Foodaa galmee keessatti galtee cehumsaa mul'isu dandeessa.
Islaayidii tokko ol irratti galtee cehumsa islaayidii gosa tokko fayyadamuuf
Mul'annoo Fooyaa Islaayidiikeessaa, galtee cehumsaa iirratti dabalu barbaaddu fili.
Heerata Hijiirraa, Cehumsa Islaayidii cuqaasi.
Galtee cehumsaa islaayidootaaf duragiisiisuuf sajoo xiqqoo islaayidii jalaa fi Heerata Islaayidoota irratti jirtu cuqaasi.
Galtee cehumsa irraa haquuf
Mul'annooIslaayidii Fooyaa iirraa islaayidii haqu barbaaddu fili.
Heerata Hojii irraaa tarree sanduuqa keessaa Hincesiisin fili.
Title is: Cehumsoota Islaayidii Fakkeessu